चक्र खाली | यस अनन्त ब्रह्माण्ड
पोस्ट व्यर्थ . सभ्यता
नवजात शिशुहरु को मृत्यु को ग्रहमा सुरुमा क्रमबद्घ अर्थहीन दिमाग धुलाई गर्न प्रयास, जो प्रवृत्ति ल्याउन गर्नुपर्छ, obydlyachivaniya मस्तिष्क र जीव जस्तै मानिसको पछि परिवर्तन आवश्यक biorobota. गर्न, कि “bezmozglыe” आमाबाबुले एक प्रारम्भिक उमेर मा आफ्नो सन्तान क्षरण पर्दाफास गर्न संकोच छैन – तिनीहरूले पूर्व-तयार पुस्तकहरू प्रस्ताव “शिक्षा”. “त्यहाँ के छैन केही छ: हाम्रो अन्तिम उत्पादन प्रयोग कृपया” – यहाँ, लेखक आफ्नो शैतानी पुस्तकहरू भन्न कि.
के भइ रहेको छ को कुनै पनि समझ वंचित गर्न, र जीवन चक्र मा disorientation बनाउन, बढ्दो पुस्ता जो धेरै गाह्रो हो यस्तो Tales बाहिर संसारमा सञ्चालनको उपयोगी सिद्धान्त बुझ्न बताउन. शायद, यस्तो Tales उपकरण जीवन जोडिएको छैन, किनभने यो कसैको अचेतन सपना प्रतिनिधित्व, वा सामान्य disinformation. यो बहिष्कृत छैन, यी कथाहरू को लेखक बस सत्य बताउन हृदय छैन, या शायद यो जीवन खतरनाक थियो, र किनभने त्यहाँ कुनै जीवन हो.
अचेत प्रजनन र लगातार पछि दाह प्रोत्साहित गर्न, podrostaet जीव ध्यान गर्ने जनन ध्यान थियो. यस मामला मा,, सिक्ने लागि अवस्था precludes र विवादास्पद चासो पूरा. जो पछि परिवार एक अप्रत्याशित थपिएको र सिस्टम को अवस्था मा अर्को दास को उद्भव निम्त्याउँछ.
को सैद्धान्तिक सेवक प्रणाली को परिस्थितिअनुसार bow गर्न चाहनुहुन्छ भने – त्यसपछि यो थप गम्भीर उपचार गर्न subjected छ. विनाश वा सिद्धान्तहरू विनाश जो, दास अमेरिका stabilnst कायम गर्न अनुमति दिने. यो सामान्यतया को KGB छ, CRU, FBR (वा विशिष्ट बुद्धि एजेन्सीहरू, गुटहरू, बन्द समाजमा र आदेश) सबै आफ्नो प्राविधिक शस्त्रागार संग. मान्छे को जीवन को सुरुदेखि भने केही आदर्श लागि प्रयास गरिएको छ (लगायत उपलब्ध आफ्नै सिद्धान्त सौन्दर्य थिए) – वयस्क जीवनको नजिक केहि तिनीहरूले psychotronic हतियार र अन्य स्मृति मेटाइ विधिहरू को मद्दतले नष्ट गर्न सुरु. छलफल अमेरिका र प्रमुख समूह को मालिक, संसारको मात्र आफ्नो साँचो मात्र समझ कि, र तपाईं सामान्यतया “लिम्प गियर” आफ्नो सिस्टम मा. कहिले काँही उनि विश्वस्त बन्न, कि “गियर” राम्रो विचार को bearers छन् – त्यसपछि यो devastation गर्न subjected छ. प्रामाणिक बीच चोरी एक उपयोगी विचारहरू “upstarts”. त्यसपछि जैविक जीव बाट छुटकारा, वा तिनलाई मानसिक बिरामी लागि एक घर मा सार्न मद्दत. सिद्धान्त, चोरी राम्रो विचार को खर्च मा अवस्थित सबै राज्य. कि, सामान्यतया, राज्य रहस्य गठन. पाठ्यक्रम, कि मा जोखिम विभिन्न बन्द समाजमा बेवास्ता गर्न सक्दैनन्, owning “गोप्य ज्ञान”, जो मार्फत सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ र सरकारी संस्थाहरू. सबै उपयोगी जानकारी, संचित बन्द समाजमा, यसलाई प्रतिनिधित्व “गोप्य ज्ञान”, यस संग्रह लागि जो तिनीहरूले लजालु छन् “को corpses भन्दा हिंड्न”.
को बुद्धि सेवाहरू भने र “रहस्यमय संगठन” तिनीहरूलाई नियुक्त कार्यहरू सामना गर्न सक्दैन – सैतानको कारण आफ्नो टोली perverts आउँछ. दुर्लभ अवस्थामा मात्र, तिनीहरूले लक्ष्य पुग्न छैन. आधुनिक, निराशाले को एक ठूलो रकम मा विसर्जन पछि, “obolvanivaemomu Duraku” स्मृति मेटाउन सुरु. यो सुनिश्चित गर्न छ, छ “तोप चारा” पछि त्यहाँ बदला गर्ने इच्छा थियो.
साना छोराछोरीलाई, जो पहिले नै विपरीत सेक्स चासो देखाएका छन् हुनुपर्छ, आमा भन्न: “सिक्न, शिक्षा प्राप्त, र “महिलाहरु उपलब्ध” हुनेछ, त्यसपछि”, तर यो एक treasured समय हुँदा “त्यसपछि”, र यो समयको बारेमा आउन छ जस्तो थियो – त्यसपछि बुबा छ, भाइ, मामा वा हजुरबुबा, एक बयान: “तपाईं मलाई थाहा छैन लाग्छ, तपाईंले अब जाँदैछन् कि “महिलाहरु उपलब्ध” जाने? एक मानिस हुन! तिनीहरूलाई कुनै पनि लिन र छोराछोरीलाई छ, बाँच्न!” अनौठो, तर जहाँ “महिलाहरु उपलब्ध”? यो बाहिर जान्छ, सारा चाल, कि “महिलाहरु उपलब्ध” सबै, आफ्नो बुझाइ मा. बरु मूर्ख, तपाईं अन्याय? मा लालच “खेल” केही व्यर्थका “महिलाहरु उपलब्ध”, र यो reckoning समय आउँछ जब – छ, कि र केही भुक्तानी. यसरी, मान्छे, एक द्वारा एक, कसैलाई प्रयोग को जीवन बिताउन… चाखलाग्दो कुरा, तपाईंको आमाबाबुले बच्चाहरु बिना बाँच्न अनुमति सहमत हुनुहुन्छ “महिलाहरु उपलब्ध” र यी बारे सोच बिना “vobshebnyh” संभावनाहरु? शायद, जवाफ स्पष्ट छ: जो शैतानको नरक देखि उनको सन्तान रक्षा गर्न सहमत? अर्को बच्चा antisocial प्रकारको हुनेछ पछि.
शायद पुरानो पुरुष नातेदार ईर्ष्या बाहिर यो सबै, या शायद उनि एक मौन कम्प्युटर प्रणाली चलिरहेका छन्. यो बहिष्कृत छैन, कि जीवन किनभने द्वारा गुजर, कि बच्चाहरु आफ्नो आमाबाबु अस्वीकार गर्न सक्दैन, वा आमाबाबुले छोराछोरीलाई सत्य बताउन असमर्थ. यसलाई उल्लेख गर्नुपर्छ, कि महिला सेक्स को प्रतिनिधिहरु, सामान्यतया, यो खेल लिन खुसी. र अझै, पक्कै पनि, लेट लागि आफ्नो वाक्य बाहिर लेख्न गर्नुपर्छ: अनावश्यक छैन समसामयिक र सचेत आयोजकहरु र executors प्रचार र imposing संरचना को परम expulsion सुनाइसकेको, र त्यो यस प्रकार को Timeliness चिसो विषय हो. सत्य, हटाउनु “bezmozglыh dur” भीड लायक छैन, चरम अवस्थामा यो एक जैविक सामाग्री रूपमा उपयोगी छ.
यो देखिन्छ, छोराछोरीलाई यस्तो जानाजानी अप्रत्याशित संगठन संग एक संसारमा मात्र जन्म छन्, जो तिनीहरूलाई घृणा र छोराछोरीलाई असाधारण दुष्ट र दुःख इच्छा. मनमा राख्न, endangered दुनिया को जनसंख्या विभिन्न प्रकारका महसुस छ कि “शैतानिक प्रभावलाई”, भन्ठानेर मात्र हाइपनोटिक प्रभाव समाप्त गर्दैन, र जैविक जीव सँगसँगै छ (बारेमा) किशोरावस्था वा शारीरिक विरंजन uselessness सम्म. मन मा प्रभाव मात्र हिंसा विभिन्न प्रकारका Committing र राहगीरों-द्वारा गर्न भौतिक चोट पैदा बारेमा विचार tossing छैन हात वा अरूलाई आए. यो तथ्यलाई कारण छ, कि “शैतानिक कार्यक्रम” बाधाओं बिना ससर्त ठाउँ मा लक्षविना हिड्नु र एक स्वस्थ जीवनको लागि हल्ला सबै प्रकारका सिर्जना.
शैतानिक कार्यक्रम असर स्टेरियोप्रकार गर्न समाज को मूख्य क्षेत्रहरु जान्छ: “एक pervert नगर्नुहोस् – यो लाजमर्दो हो!” हुनत यो राज्य व्यवस्थामा बाहिर spelled छैन, perversity सरकार सर्कलमा सामान्य व्यवहार मानिन्छ. स्थापना: “तपाईं त एक pervert हुनुहुन्न भने तपाईंले एक wimp हुनुहुन्छ र शक्ति बारेमा पनि प्रारम्भिक सोच्न।” – अग्रणी संगठन बनाउन जग हो. यो नक्षत्र को auspices अन्तर्गत क्षेत्रमा लागि विशेष गरी साँचो हो Venatici, साथै उपयुक्त जैविक जीव लागि रूपमा.
सबै प्रदर्शनमा, आकस्मिक सेक्स प्रेरित लागि इच्छा र अनन्त गर्न नम्बर ल्याउन इच्छा, यो एक ऐतिहासिक आधार छ. स्पष्ट, एक उच्च-र्याङ्किङ्ग आचरण यौन अनैतिकता लागि अद्वितीय अवसर थियो, र धेरै समय lounged, जसद्वारा अंधाधुंध mated. फलस्वरूप, छोराछोरीलाई आकस्मिक जन्म. हामी जंगली उच्च र्याङ्किङ्ग शासकहरुले जाँदै अवचेतन आक्रमण को स्तर खातामा लिन भने – त्यहाँ महिला कुनै पनि माथि गरिएका खाद आफ्नो खोज मा पक्कै छ. कारण यस अनन्तकालसम्म असन्तुष्ट को एक ठूलो रकम छ “जैविक तान्नु” संग “bludskim जीन”. सरकार सबै पेशागत वर्गीकरण कुन सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व स्थितिहरू लागि उपयुक्त छन्. एक, हुन सक्छ, सबै गलत?
यस्तो चूहहरुमा रूपमा सानो जनावर, चूहों र hamsters भन्दा छिटो प्रकार, किनभने तिनीहरूले जीवनमा कुनै ग्यारेन्टी छ र अस्तित्व को कगार मा लगातार छन्. तिनीहरूलाई मालिक सूची चोरी आफ्नो जीवन समर्पित गर्न अनुमति. हामी एक अलिकति सानो जीवन प्रकारका विचार भने (यस्तो मानव रूपमा) हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं, तिनीहरूले पनि मन र माउस ग्रह शरीरमा परजीवी छन्: प्राकृतिक र जैविक स्रोतहरू चोरी, र पनि प्रत्येक अन्य साबित, तिनीहरूले स्वामित्व. प्राकृतिक रिजर्व को कमी रूपमा, वन संख्या कम, जनावर र पशुधन, आदि संख्या. संभोग गति “podplintusnyh चूहों” बढ, खाना र आहार थप भ्रमित हुन्छ. podsazhennym GMO हुनुको प्रकार गर्न हतार छैन, पनि आफ्नो सारा कुल शाखा तेस्रो पुस्ता मा terminates किनभने, र सँगै मर्ने मेरो हजुरबुबा बाहिर आफ्नो सामान्य सबै लाइन. शरीर बाहिर रहेको गर्दा आफ्नै idiocy को महानता मनन गर्न सक्षम हुनेछ. बल्लतल्ल जीवित पछि “माउस” तीव्र गतिमा गुणन र सबै निल्न, भयानक.
तिनीहरूले पहिले नै, जो एक निरादर masculinity बन्न निर्णय – henpecked परिणत. सबैभन्दा ठूलो मान्छे हेर्न ludicrous, जो कुनै पनि मिलाउँछ “Vaciamadrid” विधिपूर्वक र “को एडी अन्तर्गत पर्न” बोर्ड, आफ्नो “छुटेका प्यान्ट”. र यो एक धेरै गम्भीर र क्रोधित अनुहार संग गर्छ. एकै समयमा तिनीहरूले पनि जीवन-समर्थन प्रणालीमा नेताहरूले हुन दावी. स्पष्ट, यो एक deranged प्रगतिशील cretinism आउँछ. यी खराब सोचाइ कम्तीमा केही rationality थियो भने – को endangered ग्रहहरू मा स्थिति कम्तिमा केही संभावनाहरु हुनेछ.
शक्तिमा भताभुङ्ग धेरै ठूलो मानिस, अवरोध गर्न efektivnost सरकार livelihoods को सिस्टम मा उपयोगी बग्छ. राम्रो प्राप्त सबै क्रमबद्घ संस्कार मा अन्तर्राष्ट्रिय पंथ उपासना podkabluchnogo मा बर्बाद छ. रुचि ती लागि, यो ड्राइभिङ शक्ति henpecked नीति निर्धारण गर्न गाह्रो हुने छैन. एक मामूली आन्दोलन – म मीर “henpecked”.
प्रभावित प्रणाली प्रेत bioform, efimerichnuyu युवा जीवित वा आफ्नै गल्ती को नतिजा मा भटक, उमेर चालीस वर्ष लाग्छ सुरु. सत्य, तिनीहरूलाई को भन्दा मात्र आफ्नै व्यवहार लागि औचित्य पत्ता लगाएर लाग्छ, र केही बस आफ्नै अपराधको लुकाउन प्रयास गर्दै. तर के चालीस वर्ष तिनीहरूलाई साथ लिन? भने मात्र दास श्रम, किनभने, अत्यधिक असम्भाव्य, तिनीहरूले अन्य उद्देश्यका लागि उपयुक्त हुन सक्छ कि.
यदि “कन्वेयर मृत्यु” र “सर्कल ब्रह्माण्ड perverts” शैतानले नेतृत्व पचास वर्ष तपाईं मुर्दा गाड्नु सकेको छैन – को, पक्कै पनि, जस्तै सबै, तपाईं एक फेसनदार dryndulet किन्न, यसमा सवारी “पिभोट davalok”, र सिस्टम grassirovat हुनेछ, कि आएको छ र आफ्नो समय. अचम्मको कुरा, तर धेरै होनहार पुरुषहरु आफ्नो रहन को लागि सहज अवस्था सुनिश्चित गर्न आफ्नो जीवनको पचास वर्ष खर्च, विकास, बुझ्न, सजग, केही छैटौं-स्तर तत्व सिक्न, र त्यसपछि एक स्प्रिंगबोर्ड रूपमा “कम-आवृत्ति माटोको मा डुबुल्की मार्न” खुशी र आनन्दको, शायद, मस्तिष्क को राज्य मा तेज परिवर्तन बाट बन्द र वास्तविकता बुझ्ने गर्न ceases. सामाजिक भाइरस कार्यक्रम लागू, जीवन “हराएको भेडा र मेढे” पूर्ण प्रयास.
समस्या सम्म अवस्थित हुनेछ, तपाईं सम्म काँध मा कुनै Dec उनको.
“खालीपनको सबै शारीरिक जान्छ।” बुद्ध Shakyamuni भने. यो अर्थ, सबै भावनात्मक devastation नेतृत्व.
मार्च 2013 को Gregorian पात्रोमा वर्ष
☸ ☼ ☆ Oliver शान्ति – वसन्त ल्हासा मा ☆ ☼ ☸
ღ ☼ ₪ Oliver शान्ति – हृदय धड्कन ღ ☼ ₪